Atletico Madrid oo Dubatay Real Madrid
Cayaartoyda Atletico oo u dabbaal degaya gool, halka kuwa Real-na ay ka murageysan yihiin goolka!
Naadiga Atletico Madrid, ayaa ka adkaatay Real Madrid, kulan ka tirsan horyaalka dalka Spain, kadib markii labada kooxood ay ku cayaareen gegada Real Madrid ee Santiago Bernabéu Stadium. Waana kulan loogu yeero Derby De Madrid, oo labadan kooxood oo isku magaalo ka dhisan ay isku arkaan.
Weeraryahanka reer France, Antoine Griezmann, ayaa gool-ka kaliya ee ay Atletico ku adkaatay u dhaliyay daqiiqaddii 53-aad. Guul darradaasi, ayaa waxay shaki galineysaa hammigii Real Madrid ee horyaalka Spain, sanadkan.
Taasi, waxay ka dhigan tahay in Atletico Madrid, ay soo afjarto lix kulan oo horyaalka ah oo laga guuleysan. Tababare Zinedine Zidane, ayay u aheyd kulankiisii ugu horreysay ee Derby De Madrid.
Atletico Madrid, guushan waxay kaga dhigan tahay in ay ku sii dhawaato Barcelona oo horyaalka hoggaamineysa, waxayna leedahay 58 dhibcood, iyadoo Barcelona oo beri Sevilla la dheeli doontana ay leedahay 63 dhibcood. Real Madrid oo laga adkaadeyna waxay leedahay 54 dhibcood.